UMboro ugxeke umfundisi we-Doom | News24
Johannesburg - Umfundisi uMboro ugxeke umphrofethi weDoom wathi isenzo sakhe sihlukumeza futhi sibeka kabi amaKrestu.
ULethebo Rabalago usengumfundisi weDoom uthukuthelise iningi ngemuva kokubonakala kwesithombesakhe efutha amalungu ebandla lakhe ngomuthi wokubulala izinambuzane.
UMboro ekhuluma nabeTshisaLive ngoLwesihlanu, uzwakalise ukucasuka kwakhe ngomfundisi uLethebo, wathi le ndoda iphendula abantu izinambuzane.
OLUNYE UDABA: Inkantolo isivale umfundisi ofutha abazalwane ngeDoom
"Wehlisa abantu isithunzi ngokusebenzisa umuthi oyingozi kuzo. Ubafaka ushevu. Lawa akusiwo amandla kaNkulunkulu, kuwubuSathane," kusho uMboro.
UMboro usole uLethebo ngokufuna ukubukwa wase exwayisa ngokuthi isenzo sakhe singase senze umonakalo omkhulu emphakathini.
"Izingane zizoyibona lento mase zicabanga ukuthi kuhle ukufuthana nge-Doom emehlweni. Zizolimazana ngegama laNkulunkulu. Fanele iphele lento," kusho uMboro.
UMboro uthe usezamile ukuvakashela uLethebo ngenhloso yokuzama ukukhuluma naye kodwa amalungu e-EFF kuthiwa aseke agasela ebandleni lakhe ngaphambi kokuba kuqale inkonzo, lo mfundisi waophela endaweni.
"Ngizamile ukuhlangana anye kodwa manje sengithathe isinqumo sokungalokhu ngijahana naye. Ngizomuthandazela. Vele sengiqalile futhi sebekhona abafundisi ababalelwa kwanbanfgu-200 abazongisiza ngikhiphe leli dimoni kuye," kusho uMboro.